Soomaaliland dhalinyarada uga digtay in ay qeyb ka noqon rabshadaha gacan ka hadalka dhaliya – Radio Daljir
Seteembar 5, 2013 4:30 b 0
Hargaysa, September 5, 2013 – Maamulka Soomaaliland ayaa shaaciyey in ay hir-gelinayaan qorshayaal horumarin ah oo loogu tala-galay in ay dhalinyarada ku horumariyaan, isla markaas wuxuu maamulku ku baaqay in laga faa?iideysto waxbarashada.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa sheegay in mar kasta diirada saari doonaan horumarinta dhalinyarada, si dalku ugu talaabsado horumar muuqda oo ku yimi shaqada dhalinta.
Wuxuu ugu? baaqay Ardayda dhigta iskuulada iyo dhalinyarada kaleba in ay ku daddaalaan waxbarashada noocyadeeda kala duwan, isagoo intaas ku daray in ay dhalinta ka fogaadaan khataraha waa weyn sida Tahriibka oo kale.
Maamulka Soomaaliland wuxuu sidoo kale dhalinta uga digay in ay ka qeyb qaataan rabshadaha hubaysan iyo gacan ka hadalka inta badan ka dhaca meelo ka mid dalka.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa hadaladan degniinta loogu jeediyey ardayda iyo dhalinyarada, wuxuu ka yiri munaasabad loo qabtay Arday ka qalin jebisay Jaamada ADMAS ee dalka Ethopia, taas oo ka dhacday Hargaysa.